Haweeney lagu daldalay Iran - BBC News Somali
Haweeney lagu daldalay Iran
Image caption Haweeneyd la daldalay; Reyhane Jabbari
Dowladda Iran ayaa daldashay haweeney la sheegay in ay dishay nin doonayay in uu kufsado.
Reyhane Jabbari oo 26 sano jir ahayd, ayaa caan ka noqotay Iran iyo caalamkaba, kaddib markii ay dadka isticmaalla barta bulshada kuwada xiriirto ee twitter-ka, ay bilaabeen olole lagu doonayo in lagu badbaadiyo.
Balse dowladda Iran waa ay diiday in ay cafiso gabadhaasi.
Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in haweeneydan ay qiratay in ay ninka toori ka galisay dhabarka, balse qolka uu falka ka dhacay uu ku sugnaa qof kale oo dhamaystiray dilka.